Mali: weerar lagu qaaday goobo dalxiis oo ku dhow Caasimadda Bamako – Kasmo Newspaper
Mali: weerar lagu qaaday goobo dalxiis oo ku dhow Caasimadda Bamako
Updated - June 18, 2017 8:16 pm GMT
London (Kasmo), Koox dableey ah ayaa galinkii dambe ee maanta weerar ku qaaday goob dalxiis o ku taalla daafaha caasimadda Mali ee Bamako, wararkii ugu dambeeyayna waxay sheegayaan geerida 2 qofood oo midkood Faransiis yahay.
Wasaaradda Amniga Mali ayaa laga xaqiijiyay in Ciidanka Mali iyo kuwa Faransiiska oo is kaashanaya ka wadaan hawlgal xerada dalxiiska “Campement Kangaba, halkaas oo inta badan ay isticmaalaan shisheeyaha reer Galbeedka.
Kangaba waxay ka koobantahay shabakd Huteello ah oo ku firirsan kaymaha, kana samaysan buulal iyo carshaan dabiici ah, oo la dhisay sannadkii 2009kii, isla markaasna leh balliyo lagu dabaasho, waxayna ciidammadu ka soo badbaadiyeen dad gaaraya 30 qofood.
In kasta oo wali cid sheegatay weerarka ayan jirin, haddana farriintu waa mid iska cad oo digniin ah, iyada oo Madaxweynaha cusub ee Fransa, Emmanuel Macron u xushay Mali in uu ku tago booqashadiisii u horreysay oo dibadda ah, tan iyo markii la doortay.
Sannadkii 2012kii woqooyiga Mali ayaa gacanta u gashay kooxo argagixiso ah oo Al-Qacida ku dhow iyo fallaagada Tuareq oo isku biiray, waxaana bilowgii 2013kii dhul ballaaran ka furtay isbahaysi caalami ah oo Faransiisku hoggaaminayo.
Sannadkii 2015kii, koox hubaysan ayaa 20kii Nofembar weerar ku galay Hotel Radisson oo ka mid ah kuwa ugu casrisan caasimadda Bamako, waxayna afduubeen dad badan iyaga oo markii dambana dilay 20 qofood.